Ahoana ny fomba araraotina ny fiovan'ny odds - Victor Mochere
Raha mieritreritra ny hametraka filokana amin'ny bokim-panatanjahantena an-tserasera ianao dia mety hanontany tena hoe inona no mitranga raha miova ny loza rehefa avy nametraka ny filokana ianao. Ny vaovao tsara miaraka amin'ny filokana amin'ny fanatanjahantena dia ny hoe fantatrao tsara foana izay tokony handresenao satria ny karamainao dia mifototra amin'ny fepetra napetraka rehefa nametraka ny filokana ianao. Mazava ho azy fa tsy zavatra tsara foana izany. Tena azo atao ny mihalava ny fotoana aorian'ny fametrahanao vola amin'ny vokatra iray.
Midika izany fa mety ho kely kokoa ny karamanao ho an'ny tsatòka mitovy amin'ny olona iray nametraka ny filokana taty aoriana noho ianao. Etsy an-danin'izany, mety hihena be ny loza; Amin'izay fotoana izay dia afaka mahazo tombony ianao amin'ny fametrahana ny volanao rehefa ela indrindra. Andeha hojerentsika hoe nahoana no mety hiova ny vintana rehefa avy nametraka filokana ianao ary ahoana no ahafahanao manararaotra ny fiovana mety hitranga rehefa manapa-kevitra izay filokana ianao.
Nahoana no miova ny vintana hilokana?
Ahoana no azonao araraotina ny fiovan'ny odds
Ny bookmaker dia mametraka foana ny fepetra voalohany amin'ny hetsika iray. Ireo fepetra ireo dia novokarin'ny solosaina ary mifototra amin'ny mety hisian'ny vokatra sasany. Raha te hametraka filokana ianao dia mendrika ny mitady ny tsara indrindra amin'ny Internet. Misy safidy goavana amin'ny casino an-tserasera manerana an'izao tontolo izao izay tsy mitsaha-mitombo. Casinos amin'izao fotoana izao, manome anao karazana safidy hilokana amin'ny Internet. Aza adino fa ny vintana voalohany hitanao dia vidiny aloha ihany ary mety hiova izy ireo. Misy antony roa mahatonga ny fiovaovan'ny filokana:
Misy ny fiovana eo amin’ny toe-piainan’ny mpifaninana na ny toerana izay mety hanova ny zava-bitan’ireo mpifaninana. Ohatra amin'izany ny hoe maratra ny mpiandry tsatoby amin'ny ekipa baolina kitra iray andro mialoha ny lalao ka tsy afaka milalao.
Vola lehibe kokoa no apetraka amin'ny mpifaninana iray na maromaro. Ohatra amin'izany ny hoe raha misy vola be apetraka amin'ny mpilalao iray amin'ny lalao tenisy
Ny bookmaker dia manova ny fepetra mba hijerena ny fanovana sy hahazoana antoka fa mampifandanja ny boky. Izany dia atao mba hampihenana ny risika amin'ny fandoavana ny fandresena.
Misy fomba roa ahafahanao miloka sy manararaotra manova ny odds. Andeha horaisintsika ohatra ny lalao tenisy. Azonao atao ny mahita fa ny vintana ho an'ny mpilalao tsirairay dia mitovy. Mety handre ianao avy eo fa misy tsaho momba ny ratra ho an'ny mpilalao iray. Azonao atao ny manapa-kevitra fa mendrika ny hametraka vola amin'ny mpilalao hafa alohan'ny hivoahan'ny vaovao ary hiova ny loza. Midika izany fa mahazo fifanarahana tsara kokoa ianao.
Raha tsy izany, mety ho hitanao fa misy mpilalao iray manana fepetra fohy kokoa noho ny nantenainao ary miahiahy fa mety ho noho ny mpankafy azy fa tsy ny tena vintana handresy azy. Amin'ity tranga ity, mety ho hevitra tsara ny manararaotra ny vintana tsara ho an'ny mpilalao hafa. Raha mametraka filokana amin'ny bokim-panatanjahantena an-tserasera ianao, dia hisy fandoavam-bola horaisina amin'ny fepetra napetraka tamin'ny fotoana nanaovanao ny filokana. Araka ny hitanao dia mety ho zavatra tsara izany raha mahay mamaky ny olana ianao ary mandika ny vaovao farany manodidina ny hetsika iray.
Top 20 tanàna tranainy indrindra eto an-tany